Zeta2Coin စျေး - အွန်လိုင်း ZET2 ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Zeta2Coin (ZET2)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Zeta2Coin (ZET2) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Zeta2Coin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Zeta2Coin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Zeta2Coin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Zeta2CoinZET2 သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0369Zeta2CoinZET2 သို့ ယူရိုEUR€0.0312Zeta2CoinZET2 သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0281Zeta2CoinZET2 သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0336Zeta2CoinZET2 သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.328Zeta2CoinZET2 သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.232Zeta2CoinZET2 သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.814Zeta2CoinZET2 သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.137Zeta2CoinZET2 သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0489Zeta2CoinZET2 သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0515Zeta2CoinZET2 သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.813Zeta2CoinZET2 သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.286Zeta2CoinZET2 သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.199Zeta2CoinZET2 သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹2.76Zeta2CoinZET2 သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.6.23Zeta2CoinZET2 သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0506Zeta2CoinZET2 သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0563Zeta2CoinZET2 သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿1.15Zeta2CoinZET2 သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.256Zeta2CoinZET2 သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥3.93Zeta2CoinZET2 သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩43.79Zeta2CoinZET2 သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦14.25Zeta2CoinZET2 သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽2.69Zeta2CoinZET2 သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴1.01
Zeta2CoinZET2 သို့ BitcoinBTC0.000003 Zeta2CoinZET2 သို့ EthereumETH0.0001 Zeta2CoinZET2 သို့ LitecoinLTC0.000679 Zeta2CoinZET2 သို့ DigitalCashDASH0.000407 Zeta2CoinZET2 သို့ MoneroXMR0.000414 Zeta2CoinZET2 သို့ NxtNXT2.88 Zeta2CoinZET2 သို့ Ethereum ClassicETC0.00544 Zeta2CoinZET2 သို့ DogecoinDOGE10.65 Zeta2CoinZET2 သို့ ZCashZEC0.000448 Zeta2CoinZET2 သို့ BitsharesBTS1.14 Zeta2CoinZET2 သို့ DigiByteDGB1.18 Zeta2CoinZET2 သို့ RippleXRP0.131 Zeta2CoinZET2 သို့ BitcoinDarkBTCD0.00127 Zeta2CoinZET2 သို့ PeerCoinPPC0.122 Zeta2CoinZET2 သို့ CraigsCoinCRAIG16.82 Zeta2CoinZET2 သို့ BitstakeXBS1.57 Zeta2CoinZET2 သို့ PayCoinXPY0.644 Zeta2CoinZET2 သို့ ProsperCoinPRC4.63 Zeta2CoinZET2 သို့ YbCoinYBC0.00002 Zeta2CoinZET2 သို့ DarkKushDANK11.84 Zeta2CoinZET2 သို့ GiveCoinGIVE79.94 Zeta2CoinZET2 သို့ KoboCoinKOBO8.41 Zeta2CoinZET2 သို့ DarkTokenDT0.034 Zeta2CoinZET2 သို့ CETUS CoinCETI106.6
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 14 Aug 2020 15:05:02 +0000.